डा. निलम तिम्सिना अर्थात नेपालको पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर – Khabar Patrika Np
डा. निलम तिम्सिना अर्थात नेपालको पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २७, २०७७ समय: २२:४२:२४
डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना नेपालको पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर बनेकी छन् । उनलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । यससँगै उनी नेपालकाे पहिलाे डेपुटी गभर्नर बनेकी हुन् ।
राष्ट्र बैंकमा हालसम्म कोही पनि महिला डेपुटी गभर्नर भएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर बन्दै डा. तिम्सिनाले नेपाली बैंकिङ इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएकी छन् ।व्यवस्थापन तथा वित्त क्षेत्रमा दख्खल राख्ने उनले बैंकिङ सिस्टममा विद्यावारिधी समेत गरेकी छन् ।
उनी राष्ट्र बैंकमा हाल एकमात्र महिला कार्यकारी निर्देशक समेत हुन् । २०५४ मंसिर २२ गतेदेखि राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गरेकी उनी २०७४ साल फागुन २५ गते राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएकी थिइन् ।
हाल उनी राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा छिन् । सोअघि उनी आन्तरिक लेखा परिक्षणमा थिइन् । झापा स्थायी घर भएकी तिम्सिना बरियताको सुचीमा तेस्रो नम्बरको कार्यकारी निर्देशक पर्छन् ।
यस्तै आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बमबहादुर मिश्रलाई समेत राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उनीहरु दुवै जनाको नाम डेपुटीका लागि सिफारिस गरेका थिए । मिश्र बिदेशी विनिमय ब्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।